ANTSIRABE : Manangasanga ny fialan’i Paul Razanakolona ao amin’ny antoko Hvm
Nanaitra ireo mpanara-baovao tao an-tampon-tanànan’Antsirabe amin’izao fotoana izao ny fahitana ny ben’ny tanàna Paul Razanakolona ny fanomanana mavitrika ny fikarakarana ny fitsidiham-paritra hotanterahin’i Andry Nirina Rajoelina, amin’ ny sabotsy ho avy izao. 10 août 2018
Itsy farany avokoa no manomana ny fandraisana rehetra ka nampivory ireo Sefo fokontany sy ny lefiny, ny talata lasa teo ary napetraka tamin’izany ny andraikitra rehetra tokony hosahanina mandritra io fitsidiham-paritra io. Talanjona ny rehetra satria toa efa manangasanga sahady ny fametraham-pialana tsy hiray petsapetsa amin’ny Hvm intsony.
Raha ny zava-nisy teo aloha mantsy dia isan’ireo nivadika tamin’i Andry Rajoelina ny lehilahy raha toa ka efa nahazo toerana tao anatin’ny fitondrana ary azo lazaina fa te hahazo ranondranony tamin’ireo mpikambana tao amin’ ny Hvm. Ny fanontaniana mipetraka aloha hatreto dia ny hoe : ”nivadika amin’ny Hvm angaha ny Ben’ny tanànan’Antsirabe ?
Asa na fahatongavan-tsaina tokoa izao na midika ho inona fa ny zava-niseho aloha hatreto raha ny tatitra avy any an-toerana dia mandray anjara mavitrika amin’ny fandraisana ny Filohan’ny tetezamita teo aloha ny tenany ankehitriny. Mialoha izao fifidianana izao ihany koa dia hita mibaribary fa mihamaro an’isa hatrany ireo olon’ny Hvm no nitsoaka an-daharana. Asa inona tokoa no tena mety ho antony ? Raha ny fanontaniana ataon’ny mpitazana sy mpandalina ny toe-draharaha momba ny politika eto amintsika.
Ankoatra ireo rehetra ireo dia efa tsinjo sy hita taratra fa efa sasamiandry ny fandalovan’ity tanora gasy vonona ity ny mponina ao Vakinankaratra amin’io sabotsy ho avy io ka ny fotoana sisa no andrasana.
Zazavavy maty natelin’ny renirano ny alahady 22 novambra lasa teo BEFOTAKA AVARATRA (340) 24 novembre 2020 Sarona ireo teti-dratsy goavana vitan’i Prudence FISOLOKIANA AO AMIN’NY FACEBOOK (172) 26 novembre 2020 Zanany sy zafikeliny ihany no nahafaty an’ilay pasitera FANAFIHANA TAO MIARINARIVO (161) 24 novembre 2020 Ben’ny tanàna teo aloha tratra anolana zazavavy tsy ampy taona ANTOBY- MIARINARIVO (114) 26 novembre 2020 Liana amin’ny fampandrosoana imasoan’ny Fitondrana ankehitriny BEN’NY TANANA TIM (86) 24 novembre 2020 « Ahiana ny mety hisian’ ny kolikoly », hoy ny Kmf/Cnoe LOHOLONA (83) 24 novembre 2020